ALCOVE TUBS (UYILO LWEENGCINGA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Alcove Tubs (Uyilo lweengcinga)
Alcove Tubs (Uyilo lweengcinga)
Nasi isikhokelo sethu kwiibhubhu ze-alcove kubandakanya iintlobo ezithandwayo zezitayile kunye nezixhobo.
Yintoni ibhafu yealcove? Ngamagama alula ibhafu yealcove ibhafu efakwe ukuntywila eludongeni kwindawo ebiyelweyo. I-alcove yaziwa njengecandelo eliguquliweyo legumbi. Ngokusisiseko njenge-indent eludongeni, ezi zihlala zibekwa eludongeni ukugcina indawo kunye nolondolozo olulula. Isitayela esiqhelekileyo sebhubhu ye-alcove ineendonga ezintathu zokudibanisa (aka ezibekwe kwi-alcove).
Kwiimeko ezinje ngokudibanisa i-alcove shafa yokudibanisa, ezi zihlala zineengcango zokutshixa iglasi, okanye iikhethini ezihambayo kwindawo evulekileyo ukunqanda ukuziva ngathi uneclaustrophobic, ngelixa usinika amandla okuba nesixhobo sokuhlamba.
Ufanele uthandane ixesha elingakanani ngaphambi komtshato
Iindidi zeeTubhu zeAlcove
Umdibaniso kunye neShower indibaniselwano
Alcove Tub Ubungakanani
Amaxabiso e-Alcove Tub
Iityhubhu zealcove yenye yezona ndawo zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo, njengoko zilunge ngokugqibeleleyo kwimida yayo nayiphi na into yoyilo lokuhlambela, kwaye zibonelela ngokucoceka ngokulula kunezinye iintlobo zeebhafu. Oku kuthetha ukuba i-alcove tub inokuba mgangatho nje ngaphandle kokuba uyi-spice. Iinketho ezimbalwa zichazwe ngezantsi:
Enye yeendidi eziqhelekileyo zeetabhu yi ishawa yangasese kunye nokudityaniswa kwebhafu. Oku kubandakanya ukusebenza kweshawa kunye nebhafu ngelixa unamathele ngaphakathi kwesithintelo sendawo ibhafu yealcove yaziwa ngayo ngaphandle kokubandakanya ishawa eyahlukileyo kwigumbi lokuhlambela.
Ukuba ucinga igumbi lokuhlambela elincinci alinakuba yindawo yokuhlambela efanelekileyo, uya kumangaliswa. Ngelixa ugcina ityhubhu yesayizi efanayo ukuba ibhafu ye-alcove ingena (Jonga apha ngezantsi) ungongeza iijetshi kwibhafu. Oku kuyakongeza kunyango, amava okuphumla. Konke okudingayo kukukhanyisa amakhandlela ambalwa, uphonsa ezinye iintyatyambo zijikeleze, kwaye kufana nokuba ungene kwi-spa!
Jonga le bhafu inzulu IAmazon
Ngoku uninzi lwethu lubaleka kwingxaki apho ungena kwibhafu entle efudumeleyo, kwaye enye indawo yayo iphuma emanzini. Isithuba kwigumbi lokuhlambela sincinci xa kufikwa kubude nobubanzi, kodwa indawo ukusuka kumgangatho ukuya eluphahleni ikho ukuze kuthathwe! Ukongeza nje iisentimitha ezimbalwa kumacala emibhobho ye-alcove kukuvumela ukuba ungeze amanzi amaninzi, oko kuthetha ukuba umzimba wakho ukhululekile phantsi kwamanzi. Ngelixa ezi zihlala zixabiso elongeziweyo ukusuka kwimodeli esemgangathweni, baya kuthatha nayiphi na indawo yokuhlambela ukusuka kumgangatho ukuya esiphelweni kwaye yonke ibhafu ethathiweyo iya kuba nemali esetyenzisiweyo.
Olunye ukhetho oluya kuyidinga ukwenza xa ukhetha ibhafu ye-alcove luhlobo lwezinto ezakhiweyo. Uhlobo ngalunye lwebhabha lunezinto ezilungileyo nezingalunganga ezilolu hlobo lulandelayo:
I-fiberglass yinto enokusetyenziswa xa kuzanywa ukonga imali kwaye ayizukugcina naziphi na ezinye izongezo ezichazwe apha ngasentla. I-fiberglass yeyona nto inexabiso eliphantsi enokusetyenziselwa iibhafu, kunye nemiboniso esemgangathweni. Ezi zixhobo zeetshipsi kwaye ziya kuba zingazinzanga ngenxa yokuba zizinto ezinokungena. I-Poror ithetha ukuba umbandela unemingxunya emincinci umoya okanye amanzi anokungena kuwo, oko kuyenza ukuba ingabi yeyona nto ibalulekileyo kwibhafu eyilelwe ngokukodwa ukubamba amanzi.
Sebenzisa i-acrylic njengebhafu yokuhlambela yeyona nto ilungileyo xa ithelekiswa ne-fiberglass. Umgangatho uphinde uboniswe kwithegi yexabiso. Ngelixa kuyabiza kakhulu kwimveliso, ngenxa yoko kuyenza ukuba ibe yinto ezinzileyo, i-acrylic discolors ngokuhamba kwexesha. Oku kuthetha ukuba emva kwethutyana ufumana ibhafu etyheli endaweni emhlophe, ethi ayithandeki ncam.
I-fiberglass kunye ne-Acrylic zizinto eziqhelekileyo ezisetyenziswayo kwiibhafu ngenxa yexabiso lentengo. Kungenxa yokuba kulula ukuzenza kuba izinto zinokubunjwa zibe yimilo oyifunayo. Apha ngezantsi kukho ezinye iindlela ezimbini zokunethezeka kwiibhafu.
Isinyithi sokujula njengoko kukhankanyiwe sikwizinga eliphezulu lezilumko kwiibhafu kwaye iindleko ziya kuphinda zibonise umgangatho. Le bhafu yomelele kakhulu kwaye kulula ukuyicoca ngenxa yemilo kunye nezinto ezibonakalayo. Ngelishwa intsimbi yentsimbi inzima kwaye ayifakwanga ngokulula, kufuneka ufakelo lobuchule kunye nokomeleza kumgangatho.
I-resin yamatye yenziwe ngamatye aqinileyo axutywe nentlaka ethile. Oku kwenza izinto ezomeleleyo ezihlala zikhohlakele ezingafuneki nakuphi na ukukhathalelwa ngaphandle kokucoca okuhle kunye nokucoceka ngamanye amaxesha.
Ifana nentsimbi yentsimbi i-resin yelitye kufuneka ibe kumgangatho oqinisiweyo ngenxa yobunzima bayo obukhulu. Ngaphezulu koku kucetyiswa ngokubanzi ukuba mayifakelwe ngokomsebenzi, zombini zijolise kooziro ekupheleni kwetyala.
Iibhafu ze-Alcove ziza ngobukhulu obahlukeneyo, kwaye ziyaziwa ngokukodwa ngokuba yindawo yokugcina izisombululo kumagumbi okuhlambela anzima. Ezi ziya kuza kuphela kubungakanani obuthile kuba zenziwe kwaye kumagumbi okuhlambela anegumbi elingaphezulu ibhafu yealcove inokubonakala ngathi incinci kwindawo enkulu.
Ubungakanani obuqhelekileyo obenziwe ngee-alcove tubs zii-intshi ezingama-48 ubude (iinyawo ezine) kunye nee-intshi ezingama-25 ububanzi (malunga neenyawo ezimbini) ngobunzulu bee-intshi ezili-16 (malunga nonyawo nesiqingatha).
Kukho ukhetho olukhulu kwii-intshi ezingama-72 ubude (iinyawo ezi-6), ii-intshi ezingama-42 ububanzi (3 neenyawo ezinesiqingatha) kunye nee-intshi ezingama-20 ubunzulu (Malunga neenyawo ezinesiqingatha). Ungasoloko ufumana iibhabhu zesiko ezenziwe kodwa gcina engqondweni ukuba iphakamisa amaxesha akhokelayo kunye neendleko kancinci. Ndwendwela eli phepha ngolwazi oluthe kratya ubukhulu bebhafu .
Njengoko bekutshiwo ngaphambili kuxhomekeka kuhlobo lwebhafu oyikhethileyo iba nefuthe elikhulu kwixabiso eliza nayo. Ibhafu esemgangathweni iqhuba malunga ne-250 ukuya kwi-500 yeedola, ukongeza ezinye zeempawu ezichaziweyo (njengejethi, ibhafu enzulu, njl.
Konke oku ngaphandle kokufakwa kwebhafu. Kofakelo ujonge i $ 750 ukuya kwi-1000 yeedola ngokusekwe kwinto esetyenzisiweyo. Ngelixa unokufuna ukugcina loo mali kwaye uzenzele ngokwakho, loo nto ixabisa malunga ne-200 yeedola ngokuxhomekeke kwindawo esele ikhona, kwaye kunokwenzeka okuninzi kakhulu ukuba ayenziwanga ngokuchanekileyo-ngamanye amaxesha ukuhamba nengcali kugcina imali ekuhambeni kwexesha.
Ukukunceda ukuba ube nombono wezimvo zakho ujonge ezi Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo zokukunceda uyilo kunye noyilo.
Iiklasikhi zaseMelika ngeRSI TTHY-NHK H… $ 217.01$ 229.00 umthengisi ogqibelele (6) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-KOHLER K-1118-RA-0 Ububanzi bebhafu, uMhlophe $ 831.00 umthengisi ogqibelele (19) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-DreamSpa ye-Ultra-eNtofontofo ye-9 'yokuShona kweMvula… $ 29.99$ 34.99 umthengisi ogqibelele (10866) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Hlaziya umsitho wezibhambathiso zomtshato
Isipho seminyaka esi-9 semveli kunye nesimanje
yimalini ikhekhe lomtshato